Ma jiraa Recycle Bin ku iPhone si uu idiin badbaadiyo ka soo gaartay xogta?
Si ka duwan ee la soo dhaafay, marka files mar la tirtiro nidaamka kombiyuutarka ama Mac lama soo kabsaday. Hadda, iyadoo horumarka ee technology, xataa files tirtiray waa u fududahay inuu ka soo kabsado. The khubaro farsamo oo ay abuurayaan qalab software awood leh qalabka computer, androids, iPhone iwm u ogolaanaya kabashada xogta fudud ee waxyaabaha laga badiyay.
Gujinaya sawirada waa hab si ay u qoraan daqiiqado xusuus ah aad noloshaada. Camera ayaa HD ee iPhone kuu ogolaanaya in aad si aad u qabato daqiiqado cajiib ah in qalab aad in aad si tartiib ah miyaan dhadhamin karaa waqtiyada firaaqada. Haddii aad tahay qof u photos gujinaya jecel aad iPhone, markaas waa inaad isagoo tiro badan oo sawiro in qalab aad. Inkasta oo aad loo hubiyo in xogta oo dhan waa ammaan badbaadiyey in qalab aad, laakiin mararka qaar xaaladaha soo baxa marka ay xog muhiim ah, waa in aad sawiro ama faylasha la xiriira shaqo ahaan, uu tirtiray shil ama aad lumiso xogta aad sababtoo ah update nidaamka ama sabab kasta oo kale.
Ma jiraan wax app recycle bin for iPhone / iPad
User iPhone kasta oo ay soo martay dhibaato ah laga badiyay xog muhiim ah oo uu fahansan yahay sida ay muhiim u tahay in la heli app recycle bin aallada ah. Dhacdooyinka aan la filayn badan sida iPhone xaday, luntay ama la waxyeeleeyey, virus weerar iwm waxay keeni kartaa in xogta taas oo mararka qaarkood ay muhiim u tahay dadka isticmaala isla markaana aan awoodi karin in laga badiyo kuwa files muhiim ah. Waxaa intaa dheer, in this sii kordhaysa adduunka teknoolajiyada sare, halkaas oo dadku ay caado ka mid ah kaydinta wax yar oo kasta oo taleefannadooda gacanta, iyadoo laga badiyay xogta kara halaag. Sababtaas ah, dadka isticmaala iPhone rabto haddii ay app a sixir in kabanayso xogta oo dhan ay si fudud.
Sida loo soo celiyo files tirtiray on iPhone
Hadda, kabsaday xogta laga badiyay iPhone waxaa loo sameeyey si fudud badan abid. Iyada oo taageero ka ah app Wondershare Dr.Fone cajiib ah, waxaad awood u kabsaday xogta lumay fudayd. No arrinta files leeyihiin waa la tirtiray, formatted ama waa la geli karin, Wondershare Dr.Fone waa xalka ugu fiican inuu ka soo kabsado dhamaan xogta lumay. Codsigan awood iPhone kuu ogolaanaya in aad ka bogsato video lumay, sawiro, dokumentiyo, faylasha, emails iwm ka drive dibadda adag ama Mac-ku-saleysan adag drive, USB drive, iPod, camera digital, telefoonka gacanta, iwm Waxaa dib u soo kabashada xogta ugu dhamaystiran xal la heli karo maanta. Waxaad soo kaban karto xogta lumay si toos ah uga qalabka macruufka ama dib u helidda hayaan labada Lugood iyo iCloud. Sidaas, waxa lumay laga helay qasabno yar.
The qaababka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
1. kabanayso xogta lumay qalabka macruufka, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud
2. Waxay bixisaa waafaqsan yahay macruufka dambeeyay 9
3. Kuu ogolaaneysa inuu ka soo kabsado fariimaha, sawiro, xiriirada, videos, wac taariikhda, qoraalo, jadwalka taariikhda, cadaymaha cod, farriinta codka iwm
4. xogta App sida Whatsapp, Flickr, Instagram, iPhoto, shidin, iwm ayaa sidoo kale waxaa si fudud u soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo app this
5. Xogta waayay tirtirka, shil qalabka, qalabka la xaday, JAILBREAK, software update iwm la raadsan karaa
6. Xoog, si degdeg ah, moodada, oo fudud oo si sahlan loo isticmaali
Wondershare Dr.Fone Si buuxda u shaqeeyo oo dhan macruufka ka versions jir ah u macruufka dambeeyay 9. Iyada oo barnaamijkan, waxaad si fudud u soo kaban karto, aad xiriirada qorin, wac taariikhda, SMS and MMS fariimaha, camera oo duudduuban, maktabadda music, videos, cadaymaha cod, qoraalo, jadwalka taariikhda, qoraalada, xusuusinta iyo xitaa Bookmarks Safari. Sidoo kale, qalab software this sidoo kale siinayaa feature la yaab leh halka aad ka dooran kartaa gudbiyo aad rabto in aad soo kabsado haddii aad rabto inuu ka soo kabsado files soo doortay ama wax walba. Sidaas, waxaa la siinayaa ikhtiyaarka ah inuu ka soo kabsado faylasha sida aad u rabto in aad aad.
Sida loo soo celiyo files tirtiray on iPhone iyadoo la kaashanayo Wondershare Dr.Fone
Wondershare Dr.Fone Siinayaa tijaabo ah oo lacag la'aan ah iyo sidoo kale kuu oggolaadaan in aad hesho weliba waxgarasho doono cad oo app software ka hor inta aan wax iibsigu. Iyada oo maxkamad lacag la'aan ah, oo aad ku eegaan karo oo dhan sanamyadiinna ka soo kabsaday, videos, music, waraaqaha iyo files archive ka hor iibsigu this Mac Data Recovery. Wondershare Dr.Fone Kabanayso xogta iyo files adigoo raacaya habka saddex tallaabo:
Dooro habka soo kabashada : Si aan ku bilaabo geedi socodka dib u soo kabashada, app kugu weydiinayo inaad doorato qaabka dib u soo kabashada marka hore. Wondershare Dr.Fone Bixisaa afar kabashada kala duwan modes- Khasaaray kabashada file, soo kabashada Barzakh, soo kabashada file ceeriin ah, hawada soo kabashada. Si fudud Waxaad dooran kartaa hab soo kabashada sida ay doorashadaada.
Sawirka qalab aad : Ka dib markii xulashada habka dib u soo kabashada, tallaabada xigta waa in iskaan qalab aad. Screen A muuqataa tilmaamayo meesha la doortay si ay u soo kabsadaan files. Markaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan goobta bartilmaameedka meesha aad rabto in la soo celiyo ee files lumay. Ka dib markii in, guji badhanka soo kabsado.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh, soo kabashada iyo badbaadin files : Dhammaan aad files lumay iyo xogta soo kabsaday doona Wondershare Dr.Fone. Si aad u fudud in aad ku eegaan karo, soo kabsado iyo badbaadin files si aad qalab, sida aad u rabto in aad. Files waxaa soo kabsaday in warqadda asalka ah oo aan wax qalad ah ama la tirtiray.
Talooyinka sida looga fogaado khasaare xogta ku saabsan iPhone
kabashada xogta iPhone bixisaa saddex siyaabood in gurmad xiriirada, fariimaha, sawiro, qoraalo iyo ka badan si uu PC deegaanka ama wax kasta oo warbaahinta saari karo sida USB iyo disk adag.
Talo 1: ka Lugood in PC badbaadi iPhone Data
In kasta oo gurmad iPhone la Lugood si looga hortago khasaaro xogta waa u fududahay, laakiin marka ay timaado soo ceshano xogta ka iPhone, ma aha mid fudud sida aad u malaynayso. Marka hore waxaad u baahan tahay in la soo celiyo aad telefoonka, ka dibna kaliya waxa aad heli kartaa file xogta gaarka ah ee gurmad Lugood. Nasiib wanaag, soo kabashada xogta iPhone kuu ogolaanaysaa inaad soo ceshano xogta ka Lugood in PC qaabab akhrin karo.
Talo 2: ka iCloud gurmad si PC soo ceshano iPhone Data
Hadda, dib u soo ceshano xogta ka iCloud waa mid ka mid ah siyaabaha sare u ogolaanaya iPhone gurmad xogta si PC. iCloud siisaa hab ammaan ah oo nabad ah si loo soo celiyo data iyo ogolaanayaa kabashada ammaan ah oo xogta mar kasta oo aad rabto. Halkan, sidoo kale waxaad dooran kartaa macluumaadka aad rabto in aad soo kaban ama aad rabto in aad wax walba oo ka soo kabsado.
Talo 3: kaabta Data ka iPhone
Haddii aadan u hagaagsan aad iPhone la iCloud ama Lugood muddo dheer, markaas waa inaad noqon lahaa ikhtiyaarka ugu fiican ee ay doortaan in ay gurmad xogta iPhone dambeeyay. Waxay kaa caawin doona inaad si looga hortago khasaaro xogta kac ahayn.
Isticmaalka taladan kor ku xusan kaa caawin doona inaad si looga hortago khasaaro xogta ka iPhone. Waxaa intaa dheer, soo kabsaday xogta la isticmaalayo tallaabooyinkan waa mid aad u fudud oo kuu ogolaanaya in aad dib u soo ceshano oo dhan xogta lumay gabi ahaanba.
Wondershare Dr.Fone Waa app kabashada xogta weyn ah iPhone oo kuu ogolaanaya in aad dib u soo ceshano oo dhan xogta lumay qaab aad u fudud. Ma aha oo kaliya taasi, Wondershare Dr.Fone qiimaha gaarka ah iyo ka ilaaliya oo dhan xog muhiim ah in aad la dhamaystiran sirta. Sidoo kale, app wuxuu siiyaa taageero 24/7 dhammaan wakiillo aqoon iyo khibrad leh si uu kaaga caawiyo.
Habka ugu fiican in la soo celiyo aad recycle bin
Sida loo Bannee Recycle Bin ee Windows
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka LG si iPhone
Sidee inay la midowdo nuqul Xiriirada on iPhone
Sidee Baan Play Files FLAC waxay On My iPhone?
Sidee inuu ka soo kabsado Call History on iPhone
> Resource > iPhone > Ma jiraa Recycle Bin ku iPhone si uu idiin badbaadiyo ka soo gaartay xogta?